Exchange tahan'ny, fakan-teny
Fifanakalozana ara-tantara ho an'ny rehetra ny tahan'ny vola eto amin'izao tontolo izao nanomboka tamin'ny 1992 mandra-amin'izao fotoana izao. Fanakalozam-bola tabilao ho an'ny isan-taona, volana na ny farany 20 taona.
Foreign fifanakalozana tahan'ny
US dolara Euro
Afghan Afghani Albaney Lek
Alzeriana Dinar Angole vaovao Kwanza
Antilliaanse gulden Aotrisiana shilling
Armeniana dram Arzantina Peso
Atsimo Sodane kilao Atsinanana Karaiba dolara
Aussie dolara Avy tao Aruba Florin
Azerbaijani manat Bahamian dolara
Bahrain Dinar Bangladesy taka
Barbados dolara Belarosiana roubles
Belize dolara Belza Franc
Bermudes dolara Bhutan ngultrum
Biolgara Lev Bitcoin
Boliviana Boliviano Bosnia sy Herzegovina convertible marika
Botsoana Pula Breziliana tena
Broney dolara Burmese kyat
Burundi Franc CFC Franc
Canadian dolara Cape Verde escudo
Cayman Islands dolara Comoran Franc
Costa Rica Colon Czech koruna
Danoà satro-boninahitra Deutsche marika
Djibouti Franc Dominikana Peso
ECU Ejiptiana kilao
Estoniana kroon Etiopiana Birr
Euro Fidji dolara
Filipina Peso Fin marika
Frantsa Frank French Pacific Franc
Gambiana dalasi Ghana cedi
Gibraltar kilao Ginea Franc
Goatemala quetzal, Goiana dolara
Grika drachma Guarani
Guernsey kilao Haitiana gourde
Holandy guilder Honduras lempira
Hong Kong dolara Hongariana forint
Hryvnia Indian Rupee
Indonezianina Rupiah Irakiana Dinar
Iraniana Rial Irlandey kilao
Islandy krone Israeliana sekely vaovao
Italiana Lire Jamaikana dolara
Jersey kilao Jordana Dinar
Kambojiana riel Kazakhstani tenge
Kenya shilling Kilao Sterling
Kina Kiobàna Peso
Koetiana Dinar Kolombiana Peso
Kongoley Franc Kwanza
Kyrgyzstani, som Lao Kip
Leone Libaney kilao
Liberia dolara Libyana Dinar
Lilangeni Litoanianina litas
Loti Macanese pataca
Malagasy Croatian Kuna Malagasy Romanian Leu
Malagasy ariary Malawi Kwacha
Malaysin ringgit Maldivian rufiyaa
Maltais Lira Manx kilao
Maorisy Rupee Maoritaniana ouguiya
Maraokana dirham Masedoniana denar
Meksikana Peso Moldavia Leu
Mongoliana tugrik Mozambikana metical
Nakfa Namibiana dolara
Nepaley Rupee New Tiorka Lira
New Zealand dolara Nikaragoa Cordoba
Nizeriana Naira Norvejiana krone
Nosy Falkland kilao Nosy Solomon dolara
Oganda shilling Omani Rial
Orogoaiana Peso Pa`anga
Pakistan Rupee Panameana Balboa
Peroviana Nuevo Sol Poloney zloty
Portogey escudo Qatari riyal
Rand Rosiana roubles
Rwanda Franc SDR (Special mpitan-zo)
Saint Helena kilao Salvadoriana Colon
Sao Tome sy Principe dobra Saodiana riyal
Serba Dinar Seychelles Rupee
Shiliana Peso Shiliana Unidad de Fomento
Singapore dolara Sipra kilao
Slovaky koruna Slovenianina tolar
Soisa Franc Somali shilling
Sri Lanka Rupee Sudanese kilao
Suriname dolara Suriname guilder
Syriana kilao Taiwan new dolara
Tajik somoni Tala
Tanzaniana shilling Thai baht
Toniziana Dinar Trinidad sy Tobago dolara
Turkmenistan manat Turkmenistan new manat
UAE Dirham US dolara
Uzbekistan vola Vanuatu vatu
Venezoeliana Bolivar Fuerte Vietnamesse Dong
Won Koreana Avaratra Won Koreana Tatsimo
Yemenita Rial Yen
Yuan Yugoslavian Dinar vaovao
Zambian Kwacha Zavatra Lat
Zavatra krona Zavatra peseta
Zeorziana Lari Zimbaboe dolara
1 troy grama ny volamena (elektronika volamena / elektronika volamena) 1 troy grama volafotsy
Ho an-tampon'ny ho an'ny lisitra ny fifanakalozana tahan'ny
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 2021.
Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 2021. Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 2021. Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2021 ho an'ny isan'andro.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 2020.
Ny tantaran'ny taham-panakalozam-bola manerantany ho an'ny 2020 isan'andro. Ny tantaran'ny taham-panakalozam-bola manerantany ho an'ny 2020 isan'andro. Eto ianao dia afaka mahita ny taham-pifanakalozam-bola isaky ny andro.
Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2019.
Tantaran'ny Malagasy ariary teny nindramina isan'andro isan'andro amin'ny 2019. Tantaran'ny Malagasy ariary teny nindramina isan'andro isan'andro amin'ny 2019. Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 2019.
Soso-kevitra sy fifanakalozana ny sandam-bola eran-tany ho an'ny 2018.
Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2018 ho an'ny isan'andro. Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2018 ho an'ny isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2018 isan'andro.
Soso-kevitra sy fifanakalozana ny sandam-bola eran-tany ho an'ny 2017.
Mitahiry ny tantaran'ny vola rehetra kilaometatra isan'andro izahay. Mitahiry ny tantaran'ny vola rehetra kilaometatra isan'andro izahay. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny andro mety ho an'ny 2017.
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 2016.
Tantaran'ny Malagasy ariary teny nindramina isan'andro isan'andro amin'ny 2016. Tantaran'ny Malagasy ariary teny nindramina isan'andro isan'andro amin'ny 2016. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2016 isaky ny isam-bolana sy isan'andro.
Tantaran'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2015.
Mitahiry ny tantaran'ny vola rehetra kilaometatra isan'andro izahay. Mitahiry ny tantaran'ny vola rehetra kilaometatra isan'andro izahay. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2015 isaky ny isam-bolana sy isan'andro.
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 2014.
Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2014 isaky ny isam-bolana sy isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2014 isaky ny isam-bolana sy isan'andro. Database ny tantaran'ny fifanakalozana.
Tantaran'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2013.
Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro mety ho an'ny 2013. Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro mety ho an'ny 2013. Daily Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana (quote) for 2013.
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 2012.
Daily Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana (quote) for 2012. Daily Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana (quote) for 2012. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2012 isaky ny isam-bolana sy isan'andro.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 2011.
Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2011 ho an'ny isan'andro. Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2011 ho an'ny isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2011 isaky ny isam-bolana sy isan'andro.
Soso-kevitra sy fifanakalozana ny sandam-bola eran-tany ho an'ny 2010.
Daily Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana (quote) for 2010. Daily Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana (quote) for 2010. Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona.
Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2009.
Ny tantaran'ny taham-panakalozam-bola manerantany ho an'ny 2009 isan'andro. Ny tantaran'ny taham-panakalozam-bola manerantany ho an'ny 2009 isan'andro. Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2009 ho an'ny isan'andro.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 2008.
Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 2008. Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 2008. Tantara momba ny saram-bola isan'andro.
Tantaran'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2007.
Tantaran'ny Malagasy ariary teny nindramina isan'andro isan'andro amin'ny 2007. Tantaran'ny Malagasy ariary teny nindramina isan'andro isan'andro amin'ny 2007. Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro mety ho an'ny 2007.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 2006.
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana sy ny teny nindramina ho an'ny 2006 isan'andro. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana sy ny teny nindramina ho an'ny 2006 isan'andro. Taham-panakalozana isan'andro (quote) ny vola eran-tany ho an'ny 2006.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 2005.
Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2005 ho an'ny isan'andro. Ny tantaran'ny an'izao tontolo izao Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny 2005 ho an'ny isan'andro. Tantara momba ny saram-bola isan'andro.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 2004.
Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2004 isaky ny isam-bolana sy isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2004 isaky ny isam-bolana sy isan'andro. Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona.
Tantaran'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2003.
Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro mety ho an'ny 2003. Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro mety ho an'ny 2003. Tantara momba ny saram-bola isan'andro.
Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2002.
Tantara momba ny saram-bola isan'andro. Tantara momba ny saram-bola isan'andro. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny andro mety ho an'ny 2002.
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 2001.
Tantara momba ny saram-bola isan'andro. Tantara momba ny saram-bola isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 2001 isaky ny isam-bolana sy isan'andro.
Tantaran'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 2000.
Mitahiry ny tantaran'ny vola rehetra kilaometatra isan'andro izahay. Mitahiry ny tantaran'ny vola rehetra kilaometatra isan'andro izahay. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny andro mety ho an'ny 2000.
Tantaran'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 1999.
Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 1999. Tantaran'ny sandam-bola isaky ny isan'andro ao amin'ny 1999. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny andro mety ho an'ny 1999.
Taham-panakalozam-bola sy teny nindramina eran-tany ho an'ny 1998.
Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona. Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona. Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny andro mety ho an'ny 1998.
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 1997.
Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona. Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona. Ny tahan'ny fifanakalozana na tenin'ny Malagasy ariary ho an'ny 1997 ho an'ny volana iray sy isan'andro.
Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 1996.
Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 1996 isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 1996 isan'andro. Fitantarana feno momba ny varotra isaky ny taona isan-taona.
Soso-kevitra sy fifanakalozana ny sandam-bola eran-tany ho an'ny 1995.
Tantaran'ny fifanakalozana ny vola rehetra amin'ny rehetra. Tantaran'ny fifanakalozana ny vola rehetra amin'ny rehetra. Ny tahan'ny fifanakalozana sy fitanana ho an'ny 1995 isan'andro.
Tantara momba ny sivana sy ny fifanakalozana amin'ny 1994.
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana sy ny teny nindramina ho an'ny 1994 isan'andro. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana sy ny teny nindramina ho an'ny 1994 isan'andro. Ny tahan'ny fifanakalozana na ny fikaonan'ny vola manerantany ho an'ny 1994 isaky ny isam-bolana sy isan'andro.